Iiprojekthi - iZhongshan City YALIS Hardware Products Co, Ltd.
Uyilo lwe-YALIS lunokubonelela ngeemfuno zakho zokwakha izixhobo zokwakha, ukusuka kwiziphatho zomnyango ukuya kwiihenjisi zomnyango, ukumisa iminyango ukuya kubabukeli beminyango, oonogada beminyango kwiminyango yeminyango nakwiminyango ekufuphi, i-YALIS ikufikelela kuthotho lwesisombululo se-hardware somnyango esekwe kwi-zinc alloy, i-aluminium alloy kunye ne-stainless izixhobo zentsimbi.
Uyilo lweYALIS unokuziqhelanisa neeprojekthi zakho zokwakha, kwaye Nazi ezinye zeeprojekthi zethu zokwakha kunye nezakhiwo ezikwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi.
ISixeko seLake seHlabathi siseChongqing, umphuhlisi yiXiangjiang International China Real Estate Co, Ltd. Le projekthi ibandakanya zombini intengiso kunye neendawo zokuhlala, ezinje ngeehotele, izindlu zezindlu, iiofisi, amagumbi, kunye nokubona abakhenkethi. U-YALIS uzukile ngokuthatha inxaxheba kule projekthi kwaye abe lilungu elinye lokubonelela ngezixhobo ze-hardware.
Ilitye lomlambo i-Australia
Ilitye lomlambo i-Australia liguqulelwe kwi-YALIS BF74204 yokwahlulahlulahlula uthotho lweprojekthi yayo yonke. Ngolwaneliseko kumgangatho, u-YALIS uqalile ubudlelwane obude obusebenzisanayo kwimarike yase-Australia.
Ukuhluma iDa Nang
Ukuqhakaza inqaba yiprojekthi yokuqala yamawele eDa Nang City eyaqalwa ukwakhiwa ngoJuni 2008 ngenqanaba lokwakha inqaba nganye enemigangatho engama-37. Izinto ezibonelelweyo: Isitshixo esineengcango kwigumbi elingumnyango ophambili weHIONE kunye nokutshixa ngezinto zeYalis
Igadi yasekwindla ibekwe eShanghai, indawo ye-CBD. Bamkele i-YALIS BF7037 yokwahlulahlulahlula uthotho lweprojekthi yayo yonke. Ukudibanisa izindlu zokuhlala kunye nezixhobo ezikumgangatho ophezulu womnyango, chaza izindlu ezenziweyo.
Ihotele iBaltschug Kempinski eMoscow
Izibambo zeminyango yeYALIS BF, zisetyenzisiwe ehotele iBaltschug eKempinski, eMoscow. I-YALIS, umnini othe ngqo utshixa iprojekthi.
IJordani Springs kwaSirayeli
I-Israel i-Jordan Springs yiprojekthi eyaziwayo ebandakanya amachibi ama-3, iivenkile ezinkulu kunye neegadi. Yiprojekhthi emalunga ne-230 hm esebenzisa i-YALIS BF74223 kunye ne-BF74229 yokutshixa ixesha.